Liverpool Oo Man United Kula Tartamaysa Thomas Muller, Arsenal Oo Sergio Busquets Diirada Ku Haysa, Everton Iyo Cheslea Oo Stones Isku Mari Waayay Iyo Wararka Kale Ee Suuqa Ugu Danbeeyay
Liverpool Oo Man United Kula Tartamaysa Thomas Muller, Arsenal Oo Sergio Busquets Diirada Ku Haysa, Everton Iyo Cheslea Oo Stones Isku Mari Waayay Iyo Wararka Kale Ee Suuqa Ugu Danbeeyay 0 July 29, 2015 in Wararka by Staff SLL Media Visits: 682
Liverpool Oo Man United Kula Tartamaysa Thomas Muller, Arsenal Oo Sergio Busquets Diirada Ku Haysa, Everton Iyo Cheslea Oo Stones Isku Mari Waayay Iyo Wararka Kale Ee Suuqa Ugu Danbeeyay Asalaamu Calaykum Waraxmatulaahi Wabarakaatuhu,Ciid Mubarik dhamaatiin kuna soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabihii ugu danbeeyay ee ay ka qoreen suuqa kale iibsiga ciyaartooyda, iyadoo suuqa kala iibsiga uu si rasmi ah u furmay 1dii bishii July wuxuuna hadda suuqu noqday mid xaami ah oo ay kooxuhu si wayn ugu mashquulsan yihiin inay ciyaaroty la soo wareegaan.
Kooxda Liverpool ayaa kooxda ay sida wayn u xifiltamaan ee Man United kula tartamaysa gooldhaliyaha kooxda Bayern Munich ee Thomas Muller. Inkasta oo ayna kooxda Bayern Munic doonayn inay iska iibiso 25 jirkan ayayna taasi kooxaha Man United iyo Liverpool ka hor joogsan inay xiiso wayn ka muujiyaan sidii ay Muller ula soo wareegi lahaayeen./Dialy Mirro.
Dhinaca kale kooxda Manchester United ayaan wali dalab rasmi ah ka gudbin xidiga ay sida wayn u doonayso ee Pedro Rodriguez. Pedro ayaa lagu iibsan karaa 22 milyan oo gini taas oo ah lacagta heshiiskiisa lagu burburin karo laakiin Man United ayaa sugaysa inta uu Di Maria ku biirayo kooxda PSG./Dialy Mail.
Waxay uu shaki wayni soo galay mustaqbalka Ashley Young ee Old Traffrod, waxayna Man United diyaar u tahay inay dhegaysto kooxaha doonaya saxiixa xidigan, waxaana ilaa hadda ugu cad cad kooxaha Tottenham iyo Aston Villa.Young ayaa galaya sanadkii ugu danbeeyay ee qandaraaskiisa Man United./Manchester Evening News.
Kooxda Arsenal ayaa liiska ciyaartoyda ay doonayso ku darsatay kubbada dilaha kooxda Barcelona ee Sergio Busquets. Gunners ayaa doonaysa inay ogaato in 27 jirkani uu doonayo inuu Barcelona ka tago waxayna Arsenal xidigan ku darsaday xidigaha ay sida wayn u doonayso./Sport.
Kooxda Chelsea ayaa dalab labaad oo 26 milyan oo gini ah ka gudbisay difaaca xulka qaranka England iyo kooxda Everton ee John Stones, laakiin kooxda Everton ayaa markale soo diiday dalabka 26 ka milyan ee gini ah ee ay Blues ku dalbatay Stones. Everton ayaa doonaysa inay Stones ka hesho ugu yaraan 34 milyah oo gini.Laakiin Chelsea ayaa la filayaa inay dalab saddexaad oo horumar lagu sameeyay ay ka gudbiso Stones./Telegraph/ Goal UK.
Xidigii hore ee kooxaha Arsenal, Manchester City iyo Tottenham ee Emmanuel Adebayor ayaa ka gudbiay tijaabada caafimaadka kooxda Aston Villa, waxaana la filayaa in kooxda Villa Park hehsiiskiisa ku dhawaaqdo 24 ka saacadood ee soo socda./Evening Standard.
Kooxda Barcelona ayaa xiiso u haysa difaacyada kooxaha Liverpool iyo Tottenham ee Alberto Moreno iyo Jan Vertonghen kuwaas oo ay doonayso inay mid kood ka dhigato badalka Adriano kaas oo la filaayo inuu ku biiro kooxda Roma. Barcelona ayaa sidoo kale lala xidhiidhinayaa Ricardo Rodriguez oo Wolfsburg u ciyaaraya iyo Layvin Kurzawa oo kooxda Monaco ka tirsan./Mundo Deportivo.
Kooxda West Ham ayaa wada xaajood kula jirta kooxda Barcelona iyada oo doonaysa inay si rasmi ah ugala soo wareegtao Alex Song oo xili ciyaareedkii hore kooxdeeda amaah ku soo qaatay. Tababaraha kooxda West Ham ee Slaven Bilic ayaana warkan cadeeyay wuxuuna sheegay in ayna wali saxaafada u sheegi karin./Sky Sports.
Kooxda Wolfsburg ayaa dhagaysan doonta dalabka ay Machester City ku doonayso xidigeeda De Bruyne, waxaana sidan sheegay tababaraha kooxdan ee Dieter Hecking. Tababare Kecking ayaa intaa raaciyay inay tixgalin doonaan dalabyada lagu doonayo De Bruyne./Goal.
Kooxda Real Madrid ayaa doonaysa inay la soo wareegto kabtanka xulka qaranka Spain ee ay da’doodu ka hoosayso 19 jirka ee Jesus Vallejo kaas oo ka tirsan kooxda Real Zaragoza. Los Blancos ayaa da’yarkan ku doonaysa inay ka soo bixiso £4.25m./ AS.
Kooxda Manchester United ayaa markale soo noolaysay rajadeedii ahayd inay Real Madrid kala soo wareegto Gareth Bale. Man United ayaa bartilmaameedkeeda kowaad ka dhigatay sidii ay Bale ku keeni lahayd Old Traffrod. Ed Woodward ayaa hadda u muuqda inuu ku guuldaraystay inay Man United la soo wareegto Muller wuxuuna diirada ku soo jeediyay Bale./Metro.
Idaacada BBC-Somali oo Fadeexad filan waan kala Kulantay Afti ay Qabatay oo kusaabsanayd Kalsoonida ay Dhagaystayaasheedu kuqabaan
Xildhibaano ka tirsan Golaha deegaanka Boorama ayaa ku eedeeyay wasiir ka tirsan xukuumada Kulmiye inuu ka danbeeyay weerarkii wasiirka boosaha iyo isgaadhsiinta Somaliland
25/03/2017 - 15:55:21